समृद्धिका आवश्यक शर्तहरु| Nepal Pati
समृद्धिका आवश्यक शर्तहरु
- कविराज खत्री
आजभोली कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना आयोग मार्फत सिंगो कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि गुरु योजना निर्माण गर्न वहस संचालन गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । गुरु योजना विना दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिदैन ।
वहस अर्थात विषय विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर सुझाव लिने समाचार सुन्दा उद्यम क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका संस्थाहरु वा काम गरेर अनुभव प्राप्त ब्यक्तिहरुले पनि सुझाव दिन पाउलान की भन्ने ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । तर कुराको गहि¥याई र गम्भीरता हेर्दा सुझाव दिने अवसरकाे रुपमा भन्दा मपाँईत्व छाँट्नकाे लागि खडा गरिएकाे अवसर रहेछ भन्ने तथ्य भेटे। राज्य सरकारले आवस्यक स्थान र महत्व नदिए पनि कर्णालीवासी भएको नाताले उद्यम क्षेत्रका बारेमा कमसेकम आफ्ना धारणाहरु पस्कने माध्यम मिडियाले बनाउन बाध्य भएकाे छु ।
हरेक दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश अभावमा छ, दुर्गममा छ, पिछडिएको छ, यहाँ केही हुन्न ? काम गर्न सकिदैन भन्ने प्रचलन र थेगो हामी सबैले गायत्री मन्त्र कै शैलीमा कण्ठस्त पारेकै छाै‌ । आम मानिसकाे धारणा बनिसकेकाे उल्लेखित सन्दर्भकाे विपक्षमा खडा हुन विवश भएकाे छु । संसारमा नभएको चीज, क्षमता, आर्थिक, सम्पदा आदि सबै कर्णाली प्रदेशमा प्रयाप्त छन् । तर राजनीतिक इच्छा शक्ति सहितकाे नेतृत्व र व्यवहारको खाँचाे कर्णाली प्रदेशले आज सम्म साक्षात्कार गर्न नपाउँदाकाे वर्तमान स्थिती नै पछाैटेपनकाे कारण हाे भन्ने ठाेकुवा गर्न सकिन्छ ।
राजनीति साक्षी छ, कर्णाली प्रदेशमा एक जना पनि भिख मागेर खाने मानिस आज सम्म भेटिएकाे छैन । यदि मागेरै जीविका चलाएका छन् भने ती मानिस कि त राजनीति गर्छन् कि राजनीतिकाे सिकार भएका छन् । कर्णाली दुःखमा छ ? कसरी हामी केही नभएका वेसाहारामा गनियाै ? हामीले हाम्रो मासिकता बदल्यौं अर्थात उद्यमशील बन्यौं भने कर्णाली प्रदेशका हामी जनता नेपालका धनि र सुखी बन्नेछौं ।
यसका लागि निर्यात बढाउने र आयात घटाउने जोड घटाउमा लाग्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको सरकार बनेर योजनाहरु सूचीकृत गर्ने, प्राथमिकिरण गर्ने, मेगा प्रोजेक्टहरु निर्माण गर्ने र गुणस्तरीय कार्य गर्नका लागि उचित मेकानिजम बनाउनु पर्दछ । जनता र सरकारको एकत्व भयो भने हाम्रै पालामा समृद्धि कर्णालीको कलिलो र सुन्दर मुहार निर्माण गर्न सक्नेछाै ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको योजना आयोगले दीर्घकालिन योजना वैंक बनाउँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । योजना निर्माण गर्दा जन आवाज र आवश्यकतालाई जनस्तरबाट सुझाव सल्लाहहरु लिनका लागि ढोका खोल्नु पर्दछ । ख्याती प्राप्त विषय विज्ञले मात्र सबै कुराको तारतम्य मिलाउन वा पूर्ण जानकारी दिन सक्छन् भनियो भने सायद गलत पो हुन्छ की ? जानकार दुई प्रकारका हुने गर्दछन । पहिलो पक्ष अध्ययन अनुसन्धानवाला र अर्को पक्ष कर्मशीलवाला । यी दुई पक्षका अनुभवहरु मिलाएर योजना तर्जुमा वा निर्माण गर्न सकिएन भने अधुरो पो हुन्छ की ? हामी कर्णाली प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको यहि मूल आवाज रहँदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पंक्तिकारले कर्णाली प्रदेश स्तरीय विगत, वर्तमान र भविष्यका लागि उद्यम, कृषि क्षेत्रको समस्या, चुनौती र संभावनाका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न शुरुवात गरेको छ । कूल १८ महिना लगाएर यस कर्णाली प्रदेशलाई औद्योगिक स्तरबाट कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? कुन मोडलबाट जान सकिन्छ ? सोही विषयमा गम्भीर अध्ययन शुरु गरिएकाे छ। मेरो यो अभियानलाई सबै तहबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छु । समृद्ध कर्णाली बनाउनकाे लागि क्षमताले भ्याएसम्मको सामान्य सुत्र उल्लेख गरेको छु । सामान्य जस्ताे लाग्ने यो सुत्रले समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिन्छ की भन्ने आसा समेत लिएकाे छु ।
समृद्धि भनेको के हो ? यस विषयमा थोरै चर्चा गरौं । समृद्धि भनेको संक्षेपमा अरु केही होइन हाम्रो श्रमलाई प्रकृतिमा मिसाउनु हो । अर्थात श्रमलाई भूमीमा मिसाएर परिणाममूखी कर्म गर्नु नै समृद्धि हो । हरेक मानिसले श्रम गर्नु नै समृद्धि हो । तर नेपालमा सय जनामा दस जनाले श्रम गर्ने र बाँकी नब्बे जना गफ गरेर खाने प्रचलन छ । यसको अन्त्य भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि ऐन, कानुन, नीति, नियम सरल र मजदुर पक्षीय हुनु पर्दछ । यो पहिलो सर्त हो । यसको अलवा समृद्ध नेपाल बनाउका लागि केही आवश्यक सर्तहरु पुरा हुनु पर्दछ । ती आधारभूत सर्तहरुको बारेमा थोरै चर्चा गरिएकाे छ ।
समृद्धिका लागि पहिलो सर्त उर्जा हो । उर्जा विना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेको आधुनिक र प्रविधिकाे युगमा देशका जनता अन्धकारमुनी वस्न बाध्य छन । देशका नदीनालाहरु विद्युत उत्पादनका लागि भन्दै विदेशीलाई विशेष गरेर भारतलाई बेच्ने काम भएको छ । तर यति सानो नेपाल संभावना हुँदाहुँदै पनि अध्याँरोमा बस्न बाध्य पारिएको छ । कुरा समृद्ध नेपालका गर्ने तर जनतालाई अहिले पनि अँध्यारोमा बाँच्न विवश बनाउने । उर्जा नभए कसरी प्रविधि संचालन गर्ने, कसरी उद्योग स्थापना गर्ने, कसरी गुणस्तरीय वस्तुहरु प्रशाेधन गरेर बजारीकरण गर्ने ? त्यस कारण समृद्धिको पहिलो आधारभूत आवश्यकता उर्जा हो । उर्जा विना समृद्धिको कुरा मिथ्या हो । यस तर्फ राज्यको उचित ध्यान गएकाे देखिदैन।
दोस्रो समृद्धिको सर्त उद्यमशीलताको विकास हो । मूलुक कुन तहमा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो मूलुक कहाँ र कुन तहमा छ ? कसैलाई थाहा छैन । मानिस बेरोजगार भयौं भनेर सडकमा कराउने गर्दछन । दिनभर भट्टी पसलमा मदिरा पिउने गर्दछन । प्राय जुवाको खालमा भेटिन्छन । कृषकहरु चार वियाँ वीउ रोपेर कृषिबाट आम्दानी छैन भन्ने गर्दछन । युवाहरु धर्तिलाई धिक्कार्दै पासपोर्ट बनाएर खाडि मूलुकमा भौतारिन आतुर देखिन्छन । पढेका शिक्षित वर्गहरु पढनुको अर्थ जागिर खानु हो । जागिर खान पाएको भए तलबभन्दा पनि कमिशन खान पाहिन्थ्यो कि भन्ने आसामा देखिन्छन् ।
अकुत सम्पति कमाउन पाहिन्थ्यो भन्ने मानसिकता बोकर बरालिएका भेटिन्छन । यस्तो प्रकारको रामलिला जनशक्ति छ हाम्रो देश नेपालमा । पढेकोले कठिन काम गर्न नमिल्ने, नपढेकाले काम नजान्ने ? यहि आधारभूत समस्याको पेरीफेरीमा नेपाल छ । तसर्थ हरेक नेपाली जबसम्म उद्यमशील हुन्नन तवसम्म समृद्धि असंभव छ । पढेकाहरु जागिरे मोहमा होइन, बाँझा बनेका खेतवारीमा श्रम गर्न तयार हुनु पर्दछ । यो वातावरण राज्यले बनाउनु पर्दछ ।
परम्परागत कृषि प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्दछ । हरेक वडाहरुमा अनिवार्य आईएलो मापदण्ड अनुसारको उद्यमशीलता तालिमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । तालिम मात्र होइन, तालिम सकेकै दिन श्रमलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ । कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न नपाईने, कोही पनि काम नगरि खान नपाईने र गाउँ गाउँमा एकघर एक लघु उद्यम अनिवार्य स्थापना गर्नु पर्ने सर्त नै लगाउनु पर्दछ । प्रत्येक नेपाली उद्यमशीलता भए भने तब पो समृद्धिको आधार तयार हुन्छ । राज्यले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
कुरा समृद्धिका गर्ने एक जिल्लामा एउटा पनि ठूलो उद्योग स्थापना नहुने हो भने गफले मात्र समाज समुन्नत हुन सक्दैन । त्यसैले एक पालिकामा एक ठूलो उद्योग, तीन मझौला उद्योग, पाँचवटा साना उद्योग र प्रत्येक घरमा लघु उद्योगहरु संचालन गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा जहाँ जुन स्राेत छ । त्यही स्रोतमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने हो भने समृद्ध नेपाल बनाउन दुई देखी तीन वर्ष पनि लाग्दैन ।
राज्यसित यहि कुराको आँट छैन । किनकी यी कार्यहरु गर्ने हो भने जनता सचेत हुन्छन । मजदूरीकरण हुन्छन, आत्मनिर्भर हुन्छन । फलतः पुरानो मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरु खारेज भई नयाँ विचार, आँट,साहास बोकेका नेताहरुको जन्म हुन्छ । सत्ताको रसस्वादन गर्न पाँहिदैन भनि शब्दमा मात्र मिठासपन दिने र काममा जनता ठग्ने प्रवृत्ति अहिले पनि सत्ताधारी पुराना सोचका नेताहरुको कायम छ । यस कारण जनतालाई उद्यमशील बनाउन पनि चाहन्नन र उद्योगको स्थापना पनि गर्न दिदैनन र भन्छन ‘समृद्ध नेपाल बनाऔं ।’
समृद्धिको अर्को आधरभूत सर्त हो संरचना निर्माण । संरचनाको कुरा गर्दा नेपालमा एउटा आतंक छ, त्यो आतंक डोजर आतंक हो । वर्षेनी अरबौं रकम बराबरको सडक निर्मार्ण गरिन्छ तर सडक वाह्रै महिना चल्दैनन । भन्नुको मतलब कमिशनका लागि विकास हुने गर्दछ । तसर्थ समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि गुणस्तरीय सडक, गुणस्तरीय विद्युतीकरण, गुणस्तरीय प्रसोधन, संकलन केन्द्र, हाटबजारहरु निर्माण्, वहुउपयोगी कोल्डस्टोरहरु निर्माण गर्नु पर्दछ ।
किसानका लागि सिचाँई, उद्यमीहरुका लागि प्रविधि, उद्योगीहरुका लागि विद्युत, ब्यापारिहरुका लागि सडक संजाल प्रमूख सर्त हुन । यसका साथै आधुनिक प्रकारका रंगशाला, खेलकुद मैदान, ठूल्ठूला पार्कहरु, पुरातात्वीक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको प्रर्वद्धन आदि संरचनाहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । यी संरचनाहरु गुणस्तरीय हुनु पर्दछ । जसका कारणले मानिसहरुको चाप बढछ, अन्तराष्ट्रिय बजारका लागि विश्वका मानिसहरु नेपाल आउँछन । सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । के राज्यले यस तर्फ अब ध्यान देला त ?
हामी नेपालीहरुको बानी आफुले उत्पादन गरेको चिजवस्तु बेच्न लाज मान्छौं । अर्थात उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको उचित प्रकारले बजारीकरण गर्न सकिएन भने उत्पादित वस्तुको कुनै काम छैन । हुन त बजारीकरणका लागि सडक प्रधान पक्ष हो । त्यो भन्दा पनि गुणस्तरीय उत्पादन, लेवलिङ्ग, प्योकेजिङ्ग र प्रचार प्रसार मूख्य पक्ष हो । एउटा उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको आकर्षक रुप दिन खोज्दछ तर उसको हुति पुग्दैन । किनभने उसलाई सरल ब्याजमा ऋण पाउँदैन, लेवलिङ्ग, प्योकेजिङ्ग, दर्ता प्रकृया, कर नीतिले उसलाई थकाउँछ ।
मन भएर, उद्यमशीलता भएर, उद्यमी भएर पनि यी समस्याले गर्दा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । तसर्थ राज्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुका लागि प्रविधि, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, विज्ञापन, राजस्वमा न्यूनतम ५ वर्षका लागि ५० प्रतिसत छुटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । सुलभ ब्याजमा परियोजनाका आधारमा ऋण दिने ब्यवस्थाको पूर्ण ग्यारेन्टि गर्नु पर्दछ । जुन ठाउँमा जुन वस्तुहरु उत्पादन हुने गर्दछन, ती वस्तुहरु अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने र ती वस्तूहरु उत्पादन भएको ठाउँमा अर्को ठाउँबाट ती वस्तुहरु भित्राउन प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दछ ।
उद्योगका निमित्त लगानी पहिलो शर्त हो । यस विषयमा राज्यले तत्काल पहाडि जिल्लामा मझाैला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीहरुलाई परियोजनाका आधारमा ५० प्रतिसत अनुदान(संरचना निर्माण र प्रविधि खरिद) दिनु पर्दछ । ब्याजदर सस्तोमा परियोजनाका आधारमा ऋणको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो स्किम राज्यले ५ वर्षका लागि लागु गरेको खण्डमा नेपालको समृद्धि हामीले सोचेभन्दा धेरै हुनेछ । यसका साथै प्रविधि भित्राउँदा भन्सार महसुल सुलभ, कर नीति उद्यममैत्री बनाउनु पर्दछ ।
समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी छ वटा आधारभूत शर्त हुन । यदि जीवित र जनपक्षिय राज्य छ भने राज्यका तीनै तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले हामीजस्ता उद्यमीहरुका यी कुरा सुन्नु पर्दछ । कुरा सुन्ने मात्र होइन, यी विषयमा रहेर ठोस काम गर्नु पर्दछ । नारामा समृद्धिका कुरा गर्ने र ब्यवहारमा काला कर्तुतहरु प्रस्तुत गर्ने हो भने समृद्धिको आधार तयार हुन सक्दैन । जसले जुन कुरा गरे पनि समृद्धिको आधारः उद्यमशीलता नै हो ।
हरेक नेपाली उद्यमशील नभए समुन्नत, समृद्ध, आत्मनिर्भर समाज बन्न कक्दैन । ब्यापारले नाफा कमाउनका लागि गरिने कार्य हो भने उद्यम समुन्नत, स्वरोजगार, समृद्ध र आत्मनिर्भर समाज बनाउन गरिने कार्य हो । यहि कुराको मनन हामी सबैले गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा यी विषयहरुका माध्यमबाट कसरी समृद्धि आउनसक्दछ ? तथ्याङ्क र वास्तविका वस्तु स्थिती सहित १८ मिहना समय खर्च गरेर कर्णाली प्रदेशको उद्यम र कृषि सम्बन्धि खोज अनुसन्धान र आवश्यक सुझाव सहित पुस्तक प्रकाशन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराउँदै उठान भएका यी विषयमा सबैलाई गम्भीर हुन अनुरोध छ ।